Iinkcukacha ngokukhawuleza malunga nephondo laseKhanada kunye neendawo zakudala
I-Canada inamaphondo ayishumi kunye nemimandla emithathu, nganye ibe nenkunzi yayo. Ukususela eCharlottetown naseHalfax empuma ukuya kwiVictoria ngasentshonalanga, iidolophu ezinkulu zaseChanada ziyaziwa. Funda ukuze ufunde okungakumbi malunga nomlando weso sixeko kunye nento okufuneka uyenze!
Inkulu-dolobha yaseKhanada ngu-Ottawa, eyabandakanywa ngo-1855 kwaye ifumana igama layo kwigama lase-Algonquin ngokuthengisa.
Iindawo zezinto zakudala zase-Ottawa zibhekisela kuluntu lwabantu ababehlala khona kangangeminyaka engamawaka ngaphambi kokuba abantu baseYurophu bafumane indawo. Phakathi kwekhulu le-17 leminyaka le-19 leminyaka, uMlambo wase-Ottawa wawuyindlela yokuqala yokuhweba uboya baseMontreal.
Namhlanje, i-Ottawa ikhaya kwikota yamacandelo e-postsecondari, ophando kunye namaziko, kuquka neSizwe soBugcisa beSizwe kunye neGrade yeSizwe.
I-Edmonton yimizi emikhulu yaseKhanada enyakatho yeCanada kwaye ihlala ibizwa ngokuba yiSango kwiNyakatho, ngenxa yeendlela zayo, izithuthi, kunye neendlela zokuthutha umoya.
Abantu basekuhlaleni abahlala kwindawo yase-Edmonton ngeenkulungwane ngaphambi kokuba abantu baseYurophu bafike. Kukholelwa ukuba omnye wabantu baseYurophu bokuqala ukuphonononga loo ndawo nguAnthony Henday, owathi watyelela ngo-1754 egameni leNkampani ye-Hudson's Bay.
I-Canadian Pacific Railway, eyafika e-Edmonton ngowe-1885, yayiyintlupheko yoqoqosho lwengingqi, izisa abatsha abavela eCanada, eUnited States naseYurophu kuloo ndawo.
I-Edmonton yahlanganiswa njengedolophu ngowe-1892, kwaye kamva iyisixeko ngo-1904. Yaba yinkunzi yiphondo elitsha elitsha lonyaka wase-Alberta.
I-Edmonton yanamhlanje iguqukele kwisixeko esinemveliso yamasiko, ezemidlalo kunye nezokhenketho ezininzi, kwaye ingumkhosi wemikhosi emibini yonyaka.
Ebizwa emva kokumkanikazi waseNgesi, iVictoria yintloko yeBritish Columbia. UVictoria uyisango eliya kwiPacific Rim, lisondele kumashishini aseMerika, kwaye unamava amaninzi olwandle kunye nomoya owenza ukuba ibe yindawo yezohwebo. Ngesimo sezulu esichukumisayo eCanada, iVictoria iyaziwa ngabantu bayo abahlala emakhaya.
Ngaphambi kokuba abantu baseYurophu befike entshona eKhanada nge-1700s, iVictoria yayihlala ngabantu baseNxweme beSalish nabomthonyama baseKonghees, abanobukho obukhulu kuloo ndawo.
Ingqwalasela yedolophu yaseMicrosoft iVictoria i-harbor yangaphakathi, ebonisa iPalamente Izakhiwo kunye ne-Fairmont Empress Hotel. UVictoria naye uhlala kwiYunivesithi yaseVictoria naseYoyunivesithi yaseRoyal Roads.
Igama elikwindawo yelizwe laseKhanada, igama likaWinipeg liyigama eli-Cree elisho "amanzi anodaka." Abantu baseMveli bahlala eWinipeg kakuhle phambi kokuba abahloli bamaFrentshi bokuqala bafike ngo-1738.
Ebizwa ngeLake Winnipeg kufuphi, isixeko sisezantsi kwe-Red River Valley, edala izimo ezinomdaka ngexesha leenyanga zasehlobo. Esi sixeko siphantse silingana ne-Atlantic nePacific yolwandle kwaye sicinga ukuba sisikhulu samaphondo aseKhanada.
Ukufika kweCanada Pacific Railway ngo-1881 kwabangela ukuphuhliswa kwenyusa eWinipeg.
Esi sixeko sisisetyenziselwano sokuthutha, esinomzila omkhulu womzila kunye nomoya. Yidolophu eneenkcubeko ezininzi apho kuthethwa iilwimi ezili-100. Kwakhona ikhaya le-Royal Winnipeg Ballet, kunye ne-Art Gallery yase-Winnipeg, enezindlu ezinkulu ze-Inuit kwihlabathi.
Fredericton, eNew Brunswick
Inkunzi-dolophu yaseNew Brunswick, uFredericton uhlelwe ngokusemthethweni kuMlambo oNgcwele kaYohane kwaye uhamba ngemini yeHalfax, eToronto, naseNew York City. Ngaphambi kokuba abantu baseYurophu befike, i-Welastekwewiyik (okanye i-Maliseet) abantu ababehlala kwiNgingqi yeFredericton kangangamakhulu eminyaka.
Abantu baseYurophu bokuqala ukuza kuFredericton babengamaFrentshi, afika ekupheleni kwe-1600s. Ummandla waziwa ngokuba yiSt. Anne's Point kwaye wabanjwa yiBrithani ngexesha leMfazwe yaseFransi neyamaNdiya ngo-1759. I-New Brunswick yaba yikoloni yayo ngo-1784, kunye noFredericton eba yinkunzi yephondo ngonyaka.
Usuku lwangoku uFredericton luyiziko lokuphanda kwezoshishino, ezolimo, kunye nobunjineli. Uninzi lwale phando luvela kwiikholeji ezimbini eziphambili kwisixeko: iYunivesithi yaseNew Brunswick kunye neYunivesithi yeSt. Thomas.
St. John's, eNewfoundland naseLabrador
Nangona imvelaphi yegama layo yinto engaqondakaliyo, iSt. John yindawo yokuhlala yaseKhanada eneminyaka eyi-1630. Ihlala echwebeni elwandle elunzulu elinxulumene ne-Narrows, i-Long Entry e-Atlantic Ocean.
IsiFrentshi kunye nesiNgesi balwa ngeSt. John ngo-1700 nangenkulungwane yokuqala ye-18, kunye nemfazwe yokugqibela yamaNdiya ne-Indiya imfazwe elwa apho ngo-1762. Nangona yayinoburhulumente bekoloni ngo-1888, iSt. ifakwe njengedolophu de kube ngu-1921.
Indawo ephambili yokuloba, uqoqosho lwasekhaya lukaSt John lwaluxinezelekile ngokuwa kweefodishi zohlobo lokuloba ngasekuqaleni kwee-1990 kodwa kuye kwandula i-petrodollars kwiiprojekthi zeoli.
Yellowknife, kwiiNorthwest Territories
Umzi-dolophu weNorthwest Territories yeso sixeko kuphela. I-Yellowknife iselunxwemeni lwe-Great Slave Lake, malunga neekhilomitha ezingama-300 ukusuka kwi-Arctic Circle. Nangona ubusika e-Yellowknife bubanda kwaye bumnyama, ukusondela kwawo kwi-Arctic Circle kuthetha ukuba iintsuku zasehlobo zide kwaye zelanga.
Kwaye kwahlala abantu base-Tlicho abemi besizwe kwaze kwafika abantu baseYurophu ngo-1785 okanye ngo-1786. Kwaye kwafika ngowe-1898 xa igolide yafunyanwa kufuphi nalapho abantu babone ukuhlaselwa okubukhali.
Igolide kunye nokulawulwa koorhulumente kwakuyizona zinto zithethwa koqoqosho lwaseJlowknife kude kube ngasekupheleni kwee-1990 nakwii-2000.
Ukuwa kweendleko zegolide kuholele ekuvalweni kweenkampani ezimbini zegolide eziphambili, kunye nokudalwa kweNunavut ngo-1999 kwakuthetha malunga neyesithathu sabasebenzi bakaRhulumente bathatyathwa.
Ukufunyanwa kwedayimane kwiiNorthwest Territories ngo-1991 kwavuselela uqoqosho kwakhona kwaye imayini ye-diamond, ukusika, ukupota kunye nokuthengisa yaba yimisebenzi emikhulu yabemi baseJuniknife.
Halifax, eNova Scotia
Indawo enkulu yedolophini kumaphondo aseAtlantic, iHalfax yenye yeelunxweme eziqhelekileyo zehlabathi kunye nolwandle olubalulekileyo. Ihlanganiswe njengedolophu ngowe-1841, iHalfax iye yabelwa ngabantu ukusuka kwi-Ice Age, kunye nabantu baseMikmaq abahlala kuloo ndawo iminyaka engama-13 000 ngaphambi kokuhlola i-Europe.
I-Halifax yayiyindawo yomhlaba ogqithiseleyo kakhulu kwimbali yaseKhanada ngo-1917 xa iinqanawa zokuthunyelwa kweempahla zahlanganisana nezinye iinqanawa echwebeni. Abantu aba-2,000 babulawa kwaye abayi-9 000 babulawa ngokuqhuma, okwakubonwe yingxenye yeso sixeko.
I-Halifax yinto yanamhlanje ingumzi weNew Museum of History, kunye neeyunivesithi eziliqela, kuquka iMary Mary kunye neYunivesithi yeKholeji yaseKing.
Eyaziwa ngokuba yiFrobisher Bay, i-Iqaluit yintloko kunye nomzi kuphela eNunavut. Iqaluit, elithetha "iintlanzi ezininzi" ngolwimi lwase-Inuit, luhlala entloko yesenyakatho-ntshona yeFrobisher Bay kwisiqithi saseBaffin.
Ama-Inuit ahlala kuloo mmandla kangangokuba iikholeji ziqhubeka zibonakala zikhona kwiIqaluit, nangona kufika abahloli bamaNgesi ngo-1561. Iqaluit yayiyindawo yomoya omkhulu owakhiwe ekuqaleni kweMfazwe Yehlabathi II, eyadlala indima enkulu xa Imfazwe Yomlomo njengesiko soqhagamshelwano.
Isixeko esikhulu kunazo zonke eCanada kunye nesine isixeko esikhulu kunesixeko saseMntla Melika, iToronto yinkcubeko, ukuzonwabisa, ishishini kunye nezezimali. I-Toronto inabantu abayizigidi ezi-3, kunye nommandla we-metro unabantu abangaphezu kwezigidi ezi-5.
Abantu base-Aboriginal baye bahlala kwindawo eyiToronto iminyaka eyiwaka, kwaye kwada kwafika iYurophu kwiminyaka ye-1600, loo ndawo yayiyindawo ye-Iroquois kunye ne-Wendat-Huron yamaqabane ase-Canada.
Ngexesha leMfazwe yeNguquko kwimakoloni aseMerika, abaninzi abahlala eBrithani babalekela eToronto. Ngo-1793, idolophu yaseYork yasungulwa; yafunyanwa ngabantu baseMelika kwiMfazwe ka-1812. Indawo leyo yaqanjwa ngokuthi iToronto kwaye ifakwe kwisixeko ngo-1834.
Njengamanyeneyo ase-US, iToronto yayinzima ukuxinwa yiNkqubela kwi-1930, kodwa uqoqosho lwayo lwahlaselwa ngexesha leMfazwe Yehlabathi II njengabafuduki beza kule ndawo. Namhlanje, iMyuziyamu yaseRoyle Ontario, iZiko leNzululwazi ye-Ontario kunye neMyuziyamu ye-Inuit Art ziphakathi kweminikelo yenkcubeko. Esi sixeko sibuyele kwiqela lezemidlalo eliqela, kuquka iMaphule Leafs (iHockey), i-Blue Jays (i-baseball) ne-Raptors (basketball).
I-Charlottetown, isiqithi sase-Prince Edward
I-Charlottetown iyinkunzi-dolophu yephondo laseCanada elincinane. Njengemihlaba eminingi yaseKhanada, abantu baseAorginia abahlala kwisiqithi sasePrince Edward iminyaka eyi-10 000 ngaphambi kokuba abantu baseYurophu bafike. Ngo-1758, abaseBrithani babenokulawulwa kwendawo.
Ngexesha le-19 leminyaka, ukwakha iinqanawa kwaba yinkampani enkulu eCharlottetown. Ngomhla, i-Charlottetown shishini elikhulu kakhulu lezokhenketho, kunye nobugcisa balo bembali kunye neHallettetown Harbour ekhangayo kwiitye ezivela kwihlabathi lonke.
Quebec City, eQuebec
IQuebec City iyinhloko-dolophu yaseQuebec. Kwakuhlala ngabantu base-Aboriginal ngamawaka eminyaka ngaphambi kokuba abantu baseYurophu bafike ngo-1535. Indawo yokuhlala yaseFransi yayingasungulwa eQuebec kwaze kwaba ngo-1608 xa uSamuel de Champlain wamisa indawo yokuthengisa apho. Yafakwa iBritish ngo-1759.
Indawo yayo kwiSt. Lawrence River yenza iQuebec City ibe yindawo enkulu yezorhwebo kwinkulungwane ye-20. I-Modern City yeQuebec City ihlala yindawo yeFrench yaseCanada, iqhutywe kuphela yiMontreal, enye idolophu enkulu yaseFrancophone eCanada.
Eyasungulwa ngowe-1882, iRegina imalunga neekhilomitha ezingama-100 kumntla we-US umda. Abemi bokuqala bendawo babengamaCrains Plains kunye namaPlains Ojibwa. I-grassy, ​​ithafa eliphambileyo lalingumhlambi weenkomo zezilwanyana ezazizingelwa ukuba ziphele-ziphele ngabathengisi boboya baseYurophu.
URinina wabandakanywa njengomzi ngo-1903, kwaye xa iSaskatchewan yaba yiphondo ngo-1905, uRegina wabizwa ngokuba ngumthamo wayo. Liye labona ukukhula okukhawulezayo kodwa ngokunyanisekileyo ukususela kwiMfazwe Yehlabathi II, kwaye ihlala yindawo ephakamileyo yezolimo eCanada.
Umzi-dolophu wase-Yukon Territory uhlala kwi-70% yabantu base Yukon. I-Whitehorse ingaphakathi kwimihlaba yenkcubeko ekwabelwana ngayo yeTa'an Kwach'an Council (TKC) kunye neSizwe soKunlin Dun yokuqala (KDFN) kwaye ineendawo zenkcubeko ezikhulayo.
Umlambo we Yukon ugeleza ngaphesheya kwe-Whitehorse, kwaye kukho izibonda ezibanzi kunye namachibi amakhulu ejikeleze isixeko. Kwakhona unqamlezwe ngeentaba ezintathu ezinkulu: Intaba eyiGrey empuma, iHaeckel Hill ngasentla-ntshona kunye neNtaba yePhondo yegolide.
Umlambo waseYukon ngaseVhgorehorse wahlala ekuphumeni kwabo baxhasi begolide ngexesha leKlondike Gold Rush ngasekupheleni kwe-1800. I-Whitehorse isisigxina samanqaku amaninzi e-Alaska kwi-Alaska Highway.
Umhla we-Ontario Ukhetho lwePhondo
Yintoni eyenzekayo Ngethuba lexesha lemibuzo yombuzo weCanada House of Commons?
I-Canada Ice Storm ngo-1998
Yonke into ofuna ukuyifumana ngeeVasta zeKhanada zeNgingqi
Iikhowudi zeeposi zeCanada
Indlela Yokufaka Imali Yakho Imali Yentlawulo ye-Canada Online
Ukubika iMali kwiNkundla yaseCanada
I-Einstein Quotes kunye neMiboniselo kuMbutho kunye nezoPolitiki
Njani kunye naliphi ixesha lokusebenzisa i-Common French Preposition "Sur" ("Ku-")
Orishas: Orunla, Osain, Oshun, Oya, neYemaya
Ngaphambi kokuba uthenge i-Poker Chips
Isenzo sokuwa kwiNcwadi
I-Sponge Analogy - Ukuqonda ukuNciphisa iNitrogen kunye neScuba Diving
Gables - Iimpawu zoKwakha ezisuka kwihlabathi jikelele
I-Four Mitzvot yePurim
Iingoma zokuqala omele uzifunde kwiGititar
Ukuhamba ngeSystem Solar System: Iiplanethi, Iinyanga, iiRings kunye nezinye
Yintoni uNorm? Kutheni Kubalulekile?
Ionic Radius Trends kwiTable Table
Uluhlu lweeMpahla zoLwazi lweMetrocolor
I-Bayes Theorem Inkcazo kunye nemizekelo
Ukutyikitya Ikopi Yomntu Omnye Udweba okanye Ifoto?
Imibala engenakwenzeka kunye nendlela yokuzibona
I-albhamu yelizwe eligqibeleleyo yexesha lonke